Krita 3.1 yakabuda, imwe yemakuru ari munyika ye digital pendi | Linux Vakapindwa muropa
Krita 3.1 yakabuda, imwe yemakuru ari munyika ye digital pendi
Nhasi tine nhau huru kune vadikani vekupenda kwehunyanzvi, kubvira Krita vhezheni 3.1 iri kunze, software ine simba yakatsaurirwa kugadzira pendi yedhijitari yemhando yepamusoro, izvo zvinokutendera kuti ugadzire mifananidzo yakawanda sezvaunoda muLinux (uye mune mamwe masisitimu anoshanda edesktop).
Krita 3.1 iri yemahara uye yakavhurwa sosi chirongwa asi haidi kugodora mamwe mapurogiramu akabhadharwa, sezvo sezvaungaona muvhidhiyo iri pamusoro, unogona kuita zvese zvese.
Mune iyi vhezheni 3.1 zvinhu zvakawanda zvakawedzerwa, senge kunyatsojeka pakusarudza kara yemufananidzo. Pamusoro peizvozvo, mukana wekushandisa HDR mivara (ine yakakwira Dynamic Range) uye nekuvandudza kwakawanda muvara pendi yakawedzerwa.
Asi chakakosha ndechekuti isu tichakwanisa kugadzira mifananidzo uye kuendesa kunze nyore mumafomu anozivikanwa. Mifananidzo yemifananidzo yakave yakawedzerwa, ichikwanisa kuwedzera mafirita uye kujeka kune iyo animation uye kune yayo yakatarwa nhanho.
Finalmente bugs dzakawanikwa mushanduro dzakapfuura dzakagadziriswa, iyo gradient mupepeti yakagadziridzwa uye bhurashi idzva rakawedzerwawo, iro rinokutendera kuti ushande zvakanyanya nekukurumidza.
Sekuda kuziva, iyi ndiyo yekutanga vhezheni yeKrita inokwanisa kutsigira OS X nenzira yakatsiga, sezvo mavhezheni ekare echirongwa ichi akaimhanyisa nemabhugi nematambudziko mazhinji.
Hapana mubvunzo chirongwa chakakura chinokutendera kuti ushande nemhando yepamusoro mifananidzo uye mhando dzemhando yepamusoro, dzese kubva mahara uye yakavhurika sosi software.
Kuti utore chirongwa ichi, enda ku Krita webhusaiti yepamutemo, peji iro Izvo zvinokutendera iwe kurodha pasi iyo Krita 3.1 chirongwa mune yayo yemahara Desktop vhezheni. Isu zvakare tine mamwe emhando yepamusoro mahara ayo asiri emahara, ayo anonzi Gemini neStudio.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Krita 3.1 yakabuda, imwe yemakuru ari munyika ye digital pendi
Inonakidza, ini ndinowanzoishandisa. Mifananidzo yacho ichafanirwa kuratidza.
Pakati peiyi Krita yekuvandudza uye iyo nyowani interface, muchikamu chekuyedza, cheLibreoffice inonzi Notebookbar, waita zuva rangu :)
Pindura kuna jose1080i
Maitiro ekuisa Steam pane Fedora